Feeding Your One-Year-Old - Somali
Cunno siinta ilmaha 1-sano-jirka ah aad ayey u fududahay maxaa yeelay ilmaha saan-qaadka ah (toddlers) in ay wax kasta cunaan ayey jecel yihiin. Canugaagu wuxuu rabi doonaa raashinka ay reerku cunayaan oo kale.
Waalid ahaan adiga ayaa go’aansan doona nooca cuntada ee aad ilmahaaga siineysid, marka ilmahaagu cunada cunayo, iyo meesha uu cunada ku cunayo. Ilmahaaga ayaa go’aansan doona cuntada inta uu ka cunayo iyo hadii in uu cunto cuno uu doonayo iyo inkale.
Cunooyinka la siin karo
U keen ilmahaaga cunooyin kala duwan oo cunto caafimaad leh ah. Cunooyinka aad xili kasta oo wax la cuno aad siineysid furuto (fruits) iyo khudaar ha ka mid noqdeen. Ku dhiiri geli ilmahaaga in uu isku dayo cunitaanka cunooyin kala duwan.
U kala jar cunooyinka cad-cad la eg 1/4- ilaa 1/2- inch la eg. Cunooyinka aad siineyso ilmaha ha ka mid noqdeen cunto jilicsan oo si fudud loo ruugi karo si fududna loo liqi karo. Isticmaal caanaha nooca whole milk ga ah (caanaha aan subaga laga saarin) ilaa uu ilmahaagu 2-jir ka gaarayo.
Caanaha iyo juuska sii marka aad siinayso cuntada iyo markaad siinayso cunto-fudud oo kali ah. Ilmahaaga sii biyo marki uu harraado inta u dhexaysa cuntooyinka. Caanaha iyo juuska/casiirka aad bay u fiicanyihiin laakiin wax badan marka aad ka siiso ilmaha caloosha ayey ka buuxiyaan. Markaa kadibna ma cunayo cuntooyinka fiican oo aad siiso.
Raashinka si fudud ayey ilmaha yar-yari ugu margadaan/saxadaan. Qaar ka mid ah cunooyinka saxashada keeni kara waxaa ka mid ah: hotdogs, hilibka adag, cadadka hilibka ee ka weyn hal-inch rubiciis, furutada iyo khudaarta adage e qeyriinka/ceeriinka ah (karootada, galeyda, digirta, canabka, tufaaxa), furutada la qalajiyey, miraha, iniinta nuts, lowska la shiiday, pretzels, baradhada shiilan (chips), daangada, nacnac jilicsan (marshmallows), nacnac adag iyo xanjo.
Waqti isku mid ah cuna maalin kasta raashinka sadexda waqti ee caadiga ah la cuno iyo cunooyinka fudud ee dhexe. Qorsheyso maalin kasta 3 waqti oo raashin caadi ah iyo 2 -3 jeer oo cuntooyin fudud oo dhexe ah. U gur raashin ilmo-yar inta la siiyo oo kale ah una daa in ilmahaagu uu weydiisto hadii loo kordhinaayo marar labaad. U ugoloow ilmahaaga in uu go’aansado inta uu raashinka inuu ka cuno uu rabo.
Ku fariisi ilmahaaga kursi hana la cuno raashinka reerka. Waqtiyada raashinka waa waqti ay reeruhu sheekada wadaagaan. Taleefishinka hortiisa wax ha ku cunin. Ilamaha saan-qaadka ah waa in ay miiska ku cunaan raashinka u dhexeeya waqtiyada caadiga ah.
Xusuusnoow marka ay ilmaha yar-yar wax cunayaan wasakh badan ayey abuuraan! U daa canugaaga in uu kaligiis wax cuno. Isaga ayaa raashinka farihiisa ku soo qabsan doona. Mar dhowna wuxuu baran doonaa in uu qaado/malqacad wax ku cuno. Caruurtu xirfadaha wax cunida waa ay bartaan, sida ruugidda/calalinta iyo liqidda, marka ay cunooyin kala duwan cunaan.
Ha ku qasbin ilmaha in uu wax cuno. Maalmaha qaarkood ilmahaagu cunto ka yar intii uu cuni jiray ayuu cunayaa. Sidaas hadii ay dhacdo waa caadi. Adigu waxaad iska xilsaartaa in aad ilmaha siisid raashin caafimaad leh.
Hilibku ruugid/calalin ayuu sida caadiga ah u baahan yahay. Ilmaha hal-sanad-jirka ah ma jecla ruugidda/calalinta. Laakiin waxay u baahan yihiin in ay tababar ku qaataan si ay si fiican ruugidda/calalinta ugu bartaan! Sababta aysan u ruugista u jecleyn 1-sanad-jirradu waxay tahay gowsihii weli uma soo bixin, waxaa lagaaga baahan yahay in aad hilibka cadad yar-yar u jar-jartid. Hilib hadii lagu daro cuno kale sida cunada loo yaqaano casseroles waxay hilibka ka dhigeysaa mid qoyan oo si fudud loo ruugi karo. Sida caadiga ah digaagga, dagiiranka (turkey), digirta, ukunta, ama farmaajada si fudud ayaa loo ruugi/calalin karaa. U ogoloow ilmahaagu in ay hilibkooda calaliyaan.
Ka goo ilmahaaga masaasadda hadda! Waqti badan ha sugin hadii kale aad ayey u adkaan doontaa in aad masaasadda ka goysid. Ku sii caanaha iyo cabitaanada casiirka ah koob. Caruurtu kaalmo ayey u baahan karaan si ay koob wax uga cabaan. Tababar markii ay ku qaataan kadib ayey bartaan. Ilmahaagu laba koob oo caano ah oo keli ah ayuu maalin kasta u baahan yahay. Intaa ka badan hadii la siiyo cuno qaadashadiisa ayey baabi’ineysaa.